Uncategorized | Shardiid Comic Strips
Maxaan Website Ugu Baahnahey?
February 6, 2014 ~ xisbi
Lahaanshada website waa shay aad muhiim u ah maata. Waxaana culumada internet-ka isku raacday in shirkat walba website ku qasban tahay, hayyaraato ama ha waynaato, aduunka dhan hala macaamultanto ama tuulo yar ha la mucaalmilto. Maxaa yeeley website-ka waa shay ka muhiimsan business card-ka. Taas kaliya ma’aha qofka asaga oo aanan ku dhibin ayuu jawaabta wax walba uu rabay kaheli karaa website-kaaga. 99.9% guri walba internet way ku jirtaa, oo meeshii aad qofka waqti uga dhuminlahayd tilmaam aad u timaameyso dukaankaaga ama xarunta shirkadaada taasoo adna waqti kaa dileysa, si fudud ayaad ugu sheegi kartaa website-keena tag meeshaas ayaad ka heleysaa (map) iyo tilmaamba. Muhiimada website lahaanshadisa intaa oo kaliya kuma koobna, guduha baan u gali doonaa bilaha soo socda.
Muuhiimada Dhisma’ah iyo qurxinta websiteka
Muhiimada websiteka aragtidiisa oo maanta aad muhiim u ah, waxaana muhiim ka dhigey, qofka marka uu arko sida website-kaaga u egyahay ayuu go’aan gaarayaa in aad tahey shirkad wayn iyo in aad tahey shirkad yar ama qof kaliya. Qofkaas oo kaashanaaya sida websiteka u dhisanyahay. Hadii website-ka u egyahay website lacag gashay oo si fiican looga shaqeeyey, qofkaas wuxuu go’aansanayaa in shirkada ay wayntahay oo aamin tahay. Waxaa kaloo shaki ku jirin in qofka joogaayo wesiteka indhaha u roon oo kalaradiisu indha dajinayaan. Hadii wesite-ka meelwalba wax ka boodayaan oo midab kasta oo jirana loo isticmaalay, qofkii si fiican oo daganaansho ku jirta wax uma aqrisan karo. Waxaa jirta wax la yirahdo (Color Code), waa in website-ka uu ku dhisan yahay midabo is raaca oo isha u roon. Haadii qof gashto surweel jaale ah iyo shaati gaduud ah oo labadaba tiq yihiin waxaa lama filaan ah in dadka is waydiinayaan in uu yahay qof miyirkiisu joogo iyo in kale iska dhaaf in ay wax kaa gaataane. Quruqda website-ka aad bay muhiim u tahay waxayna distaa aaminka qofka imaanaayo website-ka uu aaminaayo shirkada leh. Tusaale ahaan alaab ma ka gadan laheyd ama war ma ka dhageysan laheyd qof dhar midabo badan qaba oo labiskiisu qaabdaran yahay? jawaabtu waa maya. Sidoo kale website-kaagu waa dharka shirkadaada, waxaana loo baahan yahay in shirkadaada aad si fiican ugu labistaa.